Soomaaliya oo ka mid noqotay dalalka la musuqay kharashkii la dagaalanka COVID-19 – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Allhadaaftimo September 7, 2020 Uncategorized
Dalalka Kenya, Zimbabwe, Uganda, Soomaaliya iyo Nigeria ayaa lagu tilmaamay inay safka hore uga jiraan kiisaska musuq maasuq ah ee lagu sameeyey kharashkii loogu tala galay la dagaalanka cudurka Coronavirus oo caalamka ku baahay.
Agaasimaha guud ee ururka caafimaadka Adduunka (WHO) Tedros Adhanom ayaa la simay musuq maasuqa qalabka badqabka shaqaalaha caafimaadka inuu lamid yahay dil.
Sidoo kale waxaa warbixinta lagu cadeeyay inay jiri karaan dalal badan oo kale oo ku kacay musuq maasuqa lacagtii ay hey’addu ugu tala gashay la dagaalanka cudurka COVID-19.
“Heer kasta ama nooc kasta oo musuq maasuq lama aqbali karo. Si kastaba ha noqotee, musuq maasuqa la xiriira qalabka badqabka shaqaalaha caafimaadka aniga ahaan runtii waa dil. Sababtoo ah, haddii shaqaalaha caafimaadku shaqeeyaan bilaa qalab, waxaan qatar galineynaa noloshooda taasna waxay sidoo kale halis gelineysaa nolosha dadka ay u adeegaan. Marka waa dambi waana dil” ayuu yiri Dr. Tedros Adhanom
Previous Masajid Shub ku socda o soo Dumay Magalada Hargaysa
Next Ururka Al-Shabaab ayaa weerar is-miidaamin ku qaaday deegaanka Janaay-Cabdalla oo 60-KM dhanka bari uga beegan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose.